Date My Pet » Olon-tiany, A Feeling Na zavatra fanaontsika?
Raha mijery ny teny hoe 'fitiavana' ao amin'ny rakibolana no voatanisa ho roa ny anarana sy ny matoanteny! Koa inona marina ny olon-tiany?
Tsaroako indray ny fotoana rehefa zatra tena miady amin'ny pitiavana fifandraisana, Aho tamin'ny manokana aloha, ary miezaka izahay mba 'hamonjy' ny maty fifandraisana, Noho izany dia nanapa-kevitra fa ho anay ihany ny 'daty alina' isan-kerinandro. Tsy misy maha ratsy an'izany hevitra, raha ny marina ny fananana isan-kerinandro 'daty alina' dia zavatra izay mazoto mamporisika ny mpanjifa mba hanao, Tadidiko anefa ny zavatra momba izany fifandraisana manokana dia noho izy tsy manan-danja firy ny daty lasa nandeha, na oviana na oviana ny olon-tiany niverina! Niova ny fihetseham-po. Ary dia toy izany nataony misy hafa tanteraka mihitsy ny zavatra toy izany Impiry moa isika no nipetraka nanerana ny latabatra tamin'izy samy izy ny tantaram-pitiavana ao amin'ny toerana, nisy mbola tsy misy olon-tiany ho antsika manokana izany toe-javatra.
Izany, izany dia maneho fa tsy afaka manery ny olon-tiany.
Dia mampiseho fa afaka manao zavatra miaraka, izay maro ny olona no antsointsika hoe 'tantaram-pitiavana', na izany aza, raha ny fihetseham-po ao ambadiky ny zavatra tsy misy izany dia tena tsy mahatsiaro tena mihitsy ny tantaram-pitiavana, Raha ny marina dia afaka mahatsapa ho toy mitarika nify. Moa ve ianao miara-mipetraka amin'ny olona iray niaraka nandritra ny sakafo ka izany fotsiny no tsy nahatsapa marina? Resaka dia stunted sy hafahafa, na angamba nisy fahatsapana fihenjanana sy ny ratsy eny amin'ny rivotra. Raha izany no izy dia tsy mampaninona ny tantaram-pitiavana ny toerana na ny zavatra ataonao, izany fotsiny no tsy mitovy ka ny 'olon-tiany'. Ary tamin'ny flipside koa aho mieritreritra ny fotoana no nanao zavatra amin'ny olona izay tsy tantaram-pitiavana fotsiny mihitsy, Toy ny hoe mamakivaky fotaka eo amin'ny wellies ao amin'ny orana, nefa mbola Nahatsapa tantaram-pitiavana, noho ny fihetseham-po sy ny fifandraisana Tiako ny hizara izany olona.
Ahoana ny amin'ireo mpivady izay hitanao avy mazava avokoa izay efa nanana ady - ny tantaram-pitiavana ny hariva dia ho? Angamba mety ho voavonjy, raha toa ka ny iray tamin'izy ireo nanao zavatra pitiavana izay nanapaka ny ranomandry sy ny fihetseham-po feno fitiavana niteraka ny indray. Raha ny marina dia tsy milaza izy ireo fa make-up firaisana ara-nofo dia mety ho mafana? (Fa ny vehivavy mpanjifa dalana hiditra any aho ho an'ny fifandraisana izay ho amin'ny fitiavana sy ny filan'ny nofo no tsy miovaova, fa tsy mafana sy mangatsiaka).
Amin'ny maha-vehivavy vouch ho azoko ny hoe, raha misy olona mandeha lavitra mba ny zavatra tantaram-pitiavana ny vehivavy no tena nankasitraka, na dia vehivavy angamba ny hoe miaraka fotsiny ny hoe lehilahy, ary tsy azo antoka ny momba azy mbola, mangeja na mampisara-miteny isika mankasitraka tantaram-pitiavana ny vehivavy fihetsehana. Na izany aza dia Amin'izay fisehoan-javatra iray teo an-tampony, tsy ilaina-pitiavana dia mety ho fihetsika tsy mahazo aina koa, ka aiza ny tsipika?
Inona no dikan 'ny hoe olon-tiany anao? No mety amin'ny toe-javatra rehetra, ary raha tsy ny antony tsy? Azo ampiasaina mba hanasitranana sy hanamboarana ny fifandraisana, na ny handrehitra fitiavana sy ny fitiavany? Ireo no fanontaniana mahaliana hangataka.
Tena tanteraka ny tohan-kevitra amin'ny lafiny roa. Manokana ahy hanao sosokevitra hoe olon-tiany dia ny fihetseham-po, izay azo entina eo amin'ny zavatra atao na ny andiam-asa. Ohatra, Raha mikasa ny vadiko mahafinaritra ho antsika daty, ary mandeha any amin'ny ezaka mba hitondra ahy avy, na dia mampiseho ny tao an-trano miaraka amin'ny bunch ny voninkazo lehibe ho ahy, izany no nahatonga an'ilay bibidia ny tantaram-pitiavana valinteny tao anatiko. Dia hahatsapa iray lalana ary izaho dia hizara izany aminy. Dia mankasitraka ny zavatra nataony, ary izany dia hahatonga ahy ho tsara sy mitsiky. Izany, mifandimby, dia ho faly izy.
Na izany aza izay tena mahaliana ahy dia ny vehivavy manana fahafahana ho an'ny famoronana raiki-pitia ho an'ny tenantsika rehetra amin'ny alalan'ny tenantsika! Izay tiako holazaina dia izao hoe rehefa mianatra ny vehivavy fotsiny 'ho' tao amin'ny malefaka, Anarana angovo, izy dia afaka mahatsapa tantaram-pitiavana, na dia tsy misy olona ankehitriny. Izany fihetseham-po mety ho tratra amin'ny fampiasana ny mafana fandroana, labozia, miaraka amin'ny aromatherapy fanorana, ny fanaovana akanjo tsara tarehy akanjo sy amin'ny fomba maro hafa. Izany no mahatonga ny olona ilaina? Aza, Tena ny mifanohitra, Ahy hanao sosokevitra hoe raha afaka manalefaka ny vehivavy iray sy ny traikefa fihetseham-po tantaram-pitiavana, izany dia manokatra ny sehatra ho azy hankasitraka ny olona rehefa manao zavatra izay manampy amin'ny fihetseham-po io.
Raha fantatrao ny fomba mampiaraka dia ho fantatrareo fa Izaho mino ny lehilahy sy ny anjara asan'ny teny angovo tao anatin'ny fifandraisana, ka ho Anarana vehivavy dia tsy hevitra 'manao' zavatra tantaram-pitiavana ho an'ny olona, na izany aza ho raiki-pitia nahazo toerana ny 'fihetseham-po', ary 'ho', ary avy eo miresaka aminy fa ny olona dia afaka ny ho tsara tarehy. Niangavy ihany koa ny tokony ho lehilahy sy vehivavy hampifaly ny raha manao zavatra ho azy izay manao azy sambatra. Raha toa ianao ka vehivavy sy ny tianao olon-tiany kokoa eo amin'ny fifandraisanareo izany no fahazoan-dalana miezaka. Ary raha toa ianao ka lehilahy sy te-'handresy' ny vehivavy iray miaraka ianareo, na hitondra ny filan'ny nofo ny fifandraisana indray ianao amin'izao fotoana izao amin'ny, Manoro hevitra aho 'manao' zavatra tantaram-pitiavana azy, miaraka amin'ny tena fitiavana ao ambadiky ny fihetsika!